यी महिलाको छ ५५ फिटको कपाल, नुहाउन चाहिन्छ ६ बोतल स्याम्पु « Online Tv Nepal
यी महिलाको छ ५५ फिटको कपाल, नुहाउन चाहिन्छ ६ बोतल स्याम्पु
Published :7June, 2018 11:55 am
महिलाको कपाललाई सौन्दर्यको प्रतीक मानिन्छ । आफ्नो कपाल लामो र आकर्षक होस् भनेर उनीहरु सक्दो प्रयास गर्छन् । तर, आज हामीले चर्चा गर्न लागेकी महिलाको कपाल यति लामो छ, त्यो सुन्दरताको हैन आश्चर्यको प्रतीक बनिरहेको छ ।
उनको कपाल कति लामो छ भनेर तपाईंले थाहा पाउनुभयो भने तीनछक पर्नुहुनेछ । कपालकै कारण उनको नाममा विश्व कीर्तिमान कायम भएको छ ।
उनी हुन् अमेरिकाको फ्लोरिडामा बस्ने आशा मण्डेला, जसको कपाल ५५ फिट लामो छ । उनको कपालको वजन नै २० किलो छ । कपाल नुहाउनको लागि एक पटकमा उनलाई ६ बोतल स्याम्पु चाहिन्छ । अझ झन्झट त के भने धोएको कपाल सुकाउनै उनलाई पूरै दुई दिन लाग्छ ।
कपाल अति लामो भएकै कारण उनले २५ वर्षयता कपाल कोर्न पाएकी छैनन् । कपालकै कारण उनीसँग कोही बिहे गर्न चाहँदैनथ्यो । तर, एक दिन हेयर ड्रेसर इमानुएल शेगको नजर उनीमाथि पर्‍यो र उनले आशासँग बिहेको प्रस्ताव राखे । अन्तत: यी दुईको बिहे भयो ।
उनको नाम दुनियाँकै लामो कपाल भएकी महिलाको रुपमा गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड्समा दर्ता भएको छ । विश्व कीर्तिमानी भए पनि उनको दुःख पनि कम छैनन् । बढी वजनको कपालको कारण उनलाई पिठ्युँ तथा गर्धन दुखिरहने समस्या छ ।
चिकित्सकहरुले उनलाई कपाल काट्ने सल्लाह दिए पनि उनी यसमा तयार छैनन् । किनकि यही कपाल उनको पहिचान बन्नुका साथै कमाउने माध्यम पनि बनेको छ । आशाले हेयर प्रडक्ट्स तथा एसेसरिजका विज्ञापनहरुमा समेत अभिनय गरेर राम्रो कमाइ गर्दै आएकी छिन् ।
सुत्नु अघि पशुपतिनाथ मन्दिरको दर्शन गर्नुभयो त ? तस्बिर छोएर ॐ लेखि सेयर गरौं !!!
पशुपतिनाथको मन्दिर काठमाडौँ जिल्लामा रहेको ऐतिहासिक धार्मिक एवम् पर्यटकीय दृष्टिले महत्वपूर्ण तीर्थस्थल हो। यो मन्दिर
कति घण्टा सुत्नुपर्छ ?अध्ययन यसो भन्छ
धेरै मानिसलाई आफु सुत्नुपर्ने जति समय सुत्न नपाएको कुरा त जिउको थकानबाटै थाहा हुन्छ तर
७० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको बजेट बहुमतले पारित